दैव कसैका लागिपनि यति निष्ठुरी नबनोस् ! – Online Nepal
April 21, 2020 3849
काठमाडौं । यो संसार पनि विचित्रको छ । भर्खरै बुबाको मृत्यु भएको थियो कि नवजात छोरा दुई महिना पछि संसारबाट विदा भए । त्यसपछि आमा पनि सदाको लागि बिदा भइन् । तीन वर्ष भित्र, बलिउड अभिनेत्री सेलिना जेटली एकपछि अर्कोको मृत्युले टुटेर डि प्रेशनमा गइन् । उनको श्रीमान् पीटर हागले उनलाई सघाउन काम छोड्नु पर्‍यो । अभिनेत्रीले एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो पीडा व्यक्त गरिन् । सेलिना करीव ८ बर्ष पछि अभिनयमा फर्किरहेकी छिन् । उनको ४५ मिनेटको फिल्म ‘सीजंस ग्रीटिंग’ प्रीमियर स्ट्रीमिङ सर्विस जी–५ हुनेछ । यदि सेलिनाले दिएको जानकारी अनुसार उनले आफ्नो दिवंगत आमाको अन्तिम चाहनालाई पूरा गर्नका लागि यो फिल्म गरेकी हुन् ।
सेलिनाले फिल्मको प्रमोशनको सम्बन्धमा एक अंग्रेजी वेबसाइटलाई दिएको अन्तरवार्तामा भनिन्, ‘क्यामेराको सामना गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ जब तपाईं डि प्रेसनको बेला गुज्रिरहनुभएको छ र तपाईंले आफ्नो आमा बुबा र छोरा गुमाउनु भएको छ । शूटिंग मेरो जीवनको सबैभन्दा कठिन चीज थियो ।’ जुलाई २०१७ मा, सेलिनाका बुबा कर्नल वीके जेटलीको दिर्घ रोग पछि मृत्यु भयो । त्यसपछि सेप्टेम्बर २०१७ मा, उनको नवजात जुम्ल्याहा छोरा मध्ये एकको हृदयघातका कारण मृत्यु भयो । यो सब भएपछि ९ महिना पछि, जून २०१८ मा, उनकी आमा मीताले क्यान्सरसँगको लडाई हारिन् । सेलिना भन्छिन्, ‘आमा बुबा र बच्चा गुमाउनुपर्दा दुःखपूर्ण परिस्थितिबाट उदाउनु भनेको सपना जस्तै हो । म पनि त्यस्तै अवस्थामा बाँचिरहेकी थिएँ ।’
सेलिनाले भनिन्, ‘तपाईको जीवनका बहुमूल्य चीजहरू गुमाए पछि तपाईले कहिल्यै भुल्न सक्नुहुन्न । बुबा धेरै नै चाँडो बित्नुभयो अनी आमाले पनि मलाई छोड्नुभयो । मेरा बाबुआमा जीवनले भरिभराउ हुनुहुन्थ्यो, जवान, सैनिकको जोडी थियो । सत्य, यो त्यो हो कि तपाईं कहिले पनि आफ्ना आमा बुबाको मृत्युको शोकबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्न । तर यस फिल्मले मलाई धेरै भावनाहरूबाट मुक्त हुन मद्दत गर्यो । विगत बर्षदेखि अष्ट्रियामा मेरो उपचार भैरहेको छैन ।’
सेलिना भन्छिन्,‘पीटर (पतिले) जागिर छोडे किनकि म धेरै डि प्रेसनमा थिएँ । हामीसँग दुबई छोड्नेबाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन । उनी (श्रीमान) ले भने कि हामी यी सबै कुराहरुबाट जबसम्म टाढा हुँदैन त्यो बेलासम्म लामो समयसम्म अष्ट्रिया बस्नुपर्छ । त्यसले वास्तवमा मद्दत गर्‍यो । मेरो श्रीमान्‌बाट सहयोग पाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो ।’ अर्को तिर उनी आफु सामान्य अवस्थामा फर्कनका लागि त्यहाँको वातावरणले पनि भूमिका खेलेको विश्वास गर्छिन ।
सेलिना उदासीनताको बावजुद ‘सीजन ग्रीटिंग’ शूट गर्दैछिन् । किनभने उनकी आमा उनलाई चलचित्र क्षेमा फिर्ता आएको हेर्न चाहान्थिन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले यो फिल्म (सिजन ग्रीटिंग)’ गरेकी थिएँ किनकि यो मेरो आमाको अन्तिम चाहना थियो । उहाँ म सिनेमामा फर्किएको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो । फिल्मको निर्देशक रामकमल मुखर्जीले मलाई दुबई पार्किङमा उक्त कथा सुनाए । उनले मलाई भने कि कथाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष आमा–छोरी (लिलेट दुबे र सेलिना) बीचको सम्बन्ध हो । कतै यो मेरो लागि ठूलो संकेत हो । आमा फिल्महरूमा मेरो पुनरागमन भएको हेर्न चाहनुहुन्थयो त्यसैले मैले यो गरें ।’
यस अघि, सेलिना अन्तिम पटक २०१२ को ‘विल यू मेरी मी’ मा देखिएकी थिइन् । जुलाई २०११ मा, सेलिनाले अष्ट्रियामा आधारित पिटर हागसँग विवाह गरेर २०१२ मार्चमा पहिलो पटक जुम्ल्याहा छोरा विन्स्टन र विराजलाई जन्म दिइन् । पाँच बर्ष पछि, सेप्टेम्बर २०१७ मा, उनी फेरि जुम्ल्याहा सन्तानको आमा बनिन्, जसको नाम आर्थर र शमशेर हाग छ । तर शमशेर मुटुको समस्याले बाँच्न सकेन र उनको मृत्यु भयो ।
Prevयस्तो दुर्लभ योगका कारण आजदेखि यी राशि मालामाल : राशिफल/२०७७ साल बैशाख ९ गते मंगलबार
Nextजिरो ब्यालेन्समा फोन, इन्टरनेट, एसएमएस : यसरी सुचारु गर्नुहोस् सेवा
क्रुर बाबुआमा जसको मन पापैपापले भरिएको थियो, वर्षैदेखि आफ्ना १३ सन्तानलाई चेन र तालाले बाँधेर राखेको आफ्नै छोरीले खोलीन् रहस्य
१५ मिनेटमै सङ्क्रमण भए–नभएको पत्ता लाग्ने यस्तो छ तरिका
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (61973)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37968)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27824)